Waxyaabaha Kiimikada ah
Carbomer Fasalka Kiimikada Maalinlaha ah
Fasalka Kiimikada Maalin Walba Polyethylene Glycol
Kala firidhsan Deegaanka u habboon Deegaanka
Wakiilka Soodhawaynta Qaab Gudaha U Leh Deegaanka
Fasalka Caafimaadka Polyetylen Glycol
Fasalka Daawada Carbopol
Magaca: Carbomer Carbopol Carbomer 10 waa budo cad, iskutallaab badan oo iskudhafan oo loo yaqaan 'polyacrylic acid' kaas oo lagu polymerized ku yahay nidaamka sunta lagu doorto ee sunta ah. Guryaha is-qoynta iyo boodhku hooseeya ayaa si aad ah ugu fududahay in loo isticmaalo hawlgal wax ku ool ah. Waa wax-ka-beddel-yaqaan wax-ku-ool ah oo cilmu-nafsiga ah oo awood u leh inuu bixiyo isku-buuq sarreeya iyo qaabab dhalaalaya jello cad ama jello aalkolo leh iyo kareemo. Socodkeeda gaaban, guryaha aan faleebo lahayn ayaa ku habboon codsiyada sida jellada cad, hydroalch ...
Isku-darka kiimikada Ethylene oxide condensation Nooca nonionic CAS 25322-68-3 Tilmaamayaasha farsamada Qeexitaanka Muuqaalka ℃ 25 ℃ ra ColorandlustrePt-Co HydroxylvaluemgKOH / g Mawduuc miisaanka Molikalka ah 20 510 ~ 623 180 ~ 220 - -0.5 5.0 ～ 7.0 PEG-300 dareere hufan aan midab lahayn ≤20 340 ~ 416 270 ~ 330 - -0.5 5.0 ～ 7.0 PEG-400 dareere hufan oo aan midab lahayn 2520 255 ~ 312 360 ~ 440 4 ～ 10 .50.5 5.0 ～ 7.0 ...
PEG-4000 waxaa loo isticmaalaa kiniiniga, kaabsoolka, filimka, kaniiniyada la tuuro, suunka, iwm. , lagu daro warshadaha caagga ah si loo kordhiyo saliidaha iyo baaxadda alaabada caagga ah, loo yareeyo isticmaalka korontada ee wax soo saarka iyo sii dheereynta nolosha adeegga alaabada caagga ah Waxaa loo isticmaali karaa sida shay ahaan daawada iyo warshadaha qurxinta si adju ...
Magaca: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer1342 Carbopol1342 waa iskudhaffiir ahaan loo habeeyay iskudhaf ahaan acrylate acpolate. Waxay leedahay hanti dheecaan dheer viscous, waxay siisaa isku dhumuc weyn iyo joojinta awooda gaar ahaan nidaamyada wax soosaarka iyo qaababka jel caddeynta dhalaalaya. Hantidan ayaa ka dhigaysa badeecada mid si gaar ah ugu habboon xalalka biyaha ama kala firdhinta ay ku jiraan milixda milmay. Intaa waxaa sii dheer, waxay hagaajisay iswaafajinta adkaynta iyo bixinta qiimaha waxsoosaarka ...
Qaab Yijie R-90 Taxanaha Dheeraad ah Sii Daaya Caaryada
Qaab-dhismeedka: isku-darka saabuun ku-saleysan macdanta 'synthetic surfactant' Aragtida dibadda: budada cad ama jajabyada Muddada keydinta: laba sano Xidhmada: Isugeynta warqadda Kraft-ka ah ee lagu tolay bacda Miisaanka Culeyska: 25 kg / bac Bacda la adeegsan karo ee nooca caagga ah (NR), caagga butadiene (BR) . waxaa lagu qori karaa taayirada a ...
ethylene glycol (ethylene glycol) sidoo kale waxaa loo yaqaan "glycol", "1,2-ethylene glycol", oo loo soo gaabiyo EG. Qaaciddada kiimikada (CH2OH) 2 waa diol ugu fudud. Ethylene glycol waa bilaa midab, ur iyo dareere macaan, waxay sun ku tahay xoolaha, qiyaasta dadka u dhimata waa qiyaastii 1.6 g / kg. Daawada 'ethylene glycol' waxay ku milmi kartaa biyo iyo acetone, laakiin ku milmideeda ethers ayaa ah mid aad u yar. Waxaa loo isticmaalay sidii dareeraha, wakiilka ka-qaboojiyeyaasha iyo alaabta ceyriinka ah ee loo yaqaan 'polyester synthetic'. Hantida jirka ...
Jiaoyisan Pr-85 Taxanaha Kala-firdhinta
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: saabuun bir ah oo isku jir ah oo ka sameysan synthetic surfactant Muuqaal: Caddaan ama jaalle jajab ah Xaddiga Waqtiga keydinta: alaabta waa in lagu kaydiyaa bakhaar hawo leh, oo qalalan oo aan wax sunta ahayn. Baakadaha: Baakadaha laba-lakabka ah ee bacda balaastigga ah iyo bacaha warqadaha isku-duuban ee miisaanka saafiga ah: 25 kg / bac 1. Waxay yareyn kartaa isku-darka Mooney ee isku-dhafka caagga, wuxuu hagaajin karaa kala-baxa kaarboonka madow iyo wakiilka xarunta, wuxuuna hibayn karaa xarunta caagga oo leh ...
Jiaoyisan Pr-75 Taxanaha Kala-firdhinta
Astaamaha Qaab-dhismeedka: isku-darka saabuunta birta ku samaysan ee 'synthetic surfactant'. Muuqaal: Qurub bunni ah oo cad / jaalle ah. Kaydinta Waqtiga Kaydinta: alaabta waa in lagu kaydiyaa hawo hawo leh, oo qalalan oo aan wax sunta-xumaaneeyn muddo laba sano ah. Baakadaha: Baakadaha laba-lakabka ah ee bacda balaastigga ah iyo bacaha warqadaha isku-dhafan oo isku-dhafan. Miisaanka saafiga ah: 25 kg / bac. 1. Waxay yareyn kartaa isku-darka Mooney ee isku-dhafka caagga, waxay hagaajin kartaa kala-baxa kaarboonka madow iyo wakiilka xarunta, waxayna ku siin kartaa xarunta caagga ...
Magaca: acrylic acid (ester) / C10-30 alkyacrylate polymer Carbomer 1382 wuxuu adeegsadaa cyclohexane iyo ethyacetate sida dareeraha, kaas oo ku siin kara isla hakinta iyo waxqabadka xasiloonida Carbomer1342. Maaddaama ay tahay "rheologicamodifier"-ku milma biyaha, waxay leedahay waxqabad aad u fiican oo isku dhumuc weyn iyo isu gudbinta iftiinka ee nidaamka-biyaha; Isla mar ahaantaana, sheygu wuxuu leeyahay dulqaad aad u fiican oo milix ah iyo iswaafaq wanaagsan oo dhinaca sare ah; Waxay si gaar ah ugu habboon tahay jeermiska jeermiska. Biyaha Alcohogel, ...
Magaca: Carbomer990 Carbopol990 Carboomer 990 Carbopol 990 waa polymer isku xidha iskutallaabta polymerka, oo lagu milmay nidaamka isku-dhalashada ee ethyl acetate iyo cyclohexane. Waxay awood u leedahay inay siiso nafwaayay sare, iskumid aad u fiican iyo joojinta waxqabadka qiyaasta yar. Nidaamkeeda socodka gaaban (aan-dareerin) ayaa ku habboon codsiyada sida jellada cad, jellada hydroalkohol, kareemada. Marka alkali dhex dhexaad la noqdo waxay samaysaa biyo dhalaalaya ama jello hiddo-wadayaal ah iyo kareemo. Carbomer990 waa cr ...
Magaca: Carbomer Carbopol Sharaxaadda Carbomer 276 waa polymer iskumar iskudhafan leh oo leh awood qoyan oo xoog leh, oo u dhaqmeysa sidii dhumuc-sarreysa & qiyaasta hooseysa, xasiliyaha iyo wakiilka shaqada ka joojinaya. Waxay kor u qaadi kartaa qiimaha dhalidda iyo rheology ee walxaha dareeraha ah, sidaas darteed way fududahay in la helo maaddooyin aan milmi karin (granual, oil oil) oo laga joojiyay qaddarka hooseeya. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa codsiyada HI&I iyo qaababkaas oo ah halka xasilloonida oksaydhka iyo waxtarka kharashku ay yihiin shuruudaha muhiimka ah. C ...
Magaca: Carbomer676 Carbopol676 Carbomer 676 Carbopol 676 polymer waa polymer polyyacrylic acid heer sare ah oo iskutallaab badan. Waxay leedahay astaamo qulqulka gaagaaban iyo waxqabadka nafwaayay oo aad u sarreeya. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho daryeelka saxanka otomaatigga ah, nadiifiyeyaasha dusha adag, nidaamyada nadaafadda daryeelka guriga, shidaalka jelled iyo nidaamyada kale ee warshadaha. Waxay leedahay xasillooni u nugul nafsi ahaanta jiritaanka maqaarka oo leh waxtar leh waxtarna ku leh nidaamyada sare ee pH. Astaamaha Iyo Faa'iidooyinka Gawaarida Gaaban Gaaban ...
Qingdao Yinuoxin Waxyaabaha Cusub ee Co., Ltd.